Antananarivo-Renivohitra: mitobaka ny fako, tsy hita ihany izay kamiaon’ny Samva | NewsMada
Efa ho roa herinandro izao no nanaovana resabe ny fahazoan’ny Samva ny kamiao be 16 hitaterana ny fakon’Antananarivo. Hatramin’izao, tsy mbola hita mihaodihaody izany.
Mivangongo ny fako, manapaka lalana mihitsy izany amin’ny toerana sasany. Maimbo ny tanàna, sempotry ny loto sy ny fofona ratsy ny mponina.
Nolazaina tany aloha fa ny tsy fahampian’ny kamiao miasa hitatitra fako no olana tsy hahafahana maka ny fako mitoby amin’ireo dabam-pako maro eto Antananarivo. Efa misy anefa ireo kamiao lehibe ireo, saingy toa malaza tsy hihinanana.
Nilaza ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao, omaly fa noho ny antony ara-taratasy tsy mbola tomombana no tsy hahafahan’ireo kamiaobe miasa araka ny resaka nifanaovany tamin’ny minisitry ny rano.
Andraikitry ny Samva no manala ny fako eto Antananarivo. Raha ny rafitra, mifandray mivantana amin’ny minisiteran’ny rano ny Samva fa tsy miankina amin’ny kaominina velively. Miteraka loza ara-pahasalamana ho an’ny mponina ny tsy fandraisana andraikitry ny Samva amin’ny tsy fandraofana ny fako. Mizaka ny fanomezan-tsiny avy amin’ny vahoaka ny kaominina amin’ny tsy fahaiza-miasan’ny Samva. Tokony hazavaina ny antony tsy hahafahan’ny Samva manao ny asany fa tsy manempoka fotsiny toy izao, hoy ny avy ao amin’ny CUA. Ny kaominina rahateo mandoa ny “redevance sur les ordures menagères (Rom) ho an’ny Samva tsy tapaka. Efa loza mihatra ho an’ny mponin’Antananarivo ny fitobian’ny fako amin’izao fotoana indrindra ao anatin’izao vanim-potoan’ny fahavaratra izao. Entin’ny riaka any anaty lakandrano ny fako ka manentsina izany ary mitarika ny fiakaran’ny rano rehefa mikija ny orana.